Horror – Categories – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Hannibal (2013) Season3Complete Unicode Hannibal Lecter ဆိုတာ စာရေးဆရာ Thomas Harris ဖန်တီးခဲ့တဲ့ fictional character ပါ။ သူ့အကြောင်းကို ဝတ္ထုလေးအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီး လေးအုပ်စလုံးဟာ ရုပ်ရှင်အဖြစ်လည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝတ္ထုရော၊ ရုပ်ရှင်ရောဟာ အထူးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Hannibal Lecter ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ Hannibal Lecter ဆိုတာနဲ့ Anthony Hopkins ရဲ့ကြောက်ခမန်းလိလိသရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြေးမြင်ကြမှာပါပဲ။ Series အနေနဲ့ မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် Channel M-Sub ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone & လီဆူးဆူး ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Hannibal Lecter ဆိုတာ စာေရးဆရာ Thomas Harris ဖန္တီးခဲ့တဲ့ fictional character ပါ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ဝတၳဳေလးအုပ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေလးအုပ္စလုံးဟာ ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္လည္းထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဝတၳဳေရာ၊ ႐ုပ္ရွင္ေရာဟာ အထူးေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ...
TMDb: 8.2/10 1268 votes
Hannibal (2013) Season2Complete Unicode Hannibal Lecter ဆိုတာ စာရေးဆရာ Thomas Harris ဖန်တီးခဲ့တဲ့ fictional character ပါ။ သူ့အကြောင်းကို ဝတ္ထုလေးအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီး လေးအုပ်စလုံးဟာ ရုပ်ရှင်အဖြစ်လည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝတ္ထုရော၊ ရုပ်ရှင်ရောဟာ အထူးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Hannibal Lecter ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ Hannibal Lecter ဆိုတာနဲ့ Anthony Hopkins ရဲ့ကြောက်ခမန်းလိလိသရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြေးမြင်ကြမှာပါပဲ။ Series အနေနဲ့ မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် Channel M-Sub ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Hannibal Lecter ဆိုတာ စာေရးဆရာ Thomas Harris ဖန္တီးခဲ့တဲ့ fictional character ပါ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ဝတၳဳေလးအုပ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေလးအုပ္စလုံးဟာ ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္လည္းထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဝတၳဳေရာ၊ ႐ုပ္ရွင္ေရာဟာ အထူးေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ Hannibal Lecter ...
TMDb: 8.1/10 1185 votes
Hannibal (2013) Season 1 Complete Unicode Hannibal Lecter ဆိုတာ စာရေးဆရာ Thomas Harris ဖန်တီးခဲ့တဲ့ fictional character ပါ။ သူ့အကြောင်းကို ဝတ္ထုလေးအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီး လေးအုပ်စလုံးဟာ ရုပ်ရှင်အဖြစ်လည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝတ္ထုရော၊ ရုပ်ရှင်ရောဟာ အထူးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Hannibal Lecter ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ Hannibal Lecter ဆိုတာနဲ့ Anthony Hopkins ရဲ့ကြောက်ခမန်းလိလိသရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြေးမြင်ကြမှာပါပဲ။ Series အနေနဲ့ မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် Channel M-Sub ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Hannibal Lecter ဆိုတာ စာေရးဆရာ Thomas Harris ဖန္တီးခဲ့တဲ့ fictional character ပါ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ဝတၳဳေလးအုပ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေလးအုပ္စလုံးဟာ ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္လည္းထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဝတၳဳေရာ၊ ႐ုပ္ရွင္ေရာဟာ အထူးေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ Hannibal Lecter ...
TMDb: 8.1/10 1147 votes
Sweet Home (2020) Season 1 Complete Unicode Netflix ရဲ့ Korea Series ကြမ်းကြမ်းဖြစ်တဲ့ Sweet Home (2020) ကို Channel M-Sub မှာ 1080p Web-Rip Quality နဲ့ Season 1 အစအဆုံးကြည့်လို့ရပါပြီ။ ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Quality - Web-dl 1080p Episode 1 Server M-File Episode2Server M-File Episode3Server M-File Episode4Server M-File Episode5Server M-File Episode6Server M-File Episode7Server M-File Episode 8 Server M-File Episode9Server M-File Episode 10 Server M-File
TMDb: 8.6/10 88 votes
Bring It On, Ghost (2016) Complete Unicode လူငယ်လေးတစ်ယောက်..သူ့မှာ မွေးရာပါထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ပါလာတယ်…အဲ့ဒါက သရဲတွေကို မြင်နေရသလို ဒီသရဲတွေကို ထိတွေ့တိုက်ခိုက်လို့လည်းရတယ်…ဒီလောကကြီးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့သရဲတွေ ရှိသလို လူတွေကို လိုက်လံဒုက္ခပေးနေတဲ့ သရဲဆိုးတွေလည်းရှိနေတော့ ဒီလူငယ်လေးဟာ ခေတ်နဲ့အလိုက် တစ်မျိုးကြံတယ်…သရဲဆိုးတွေကို အခကြေးငွေနဲ့ လိုက်လံနှိမ်နှင်းပညာပေးရင်း စီးပွားရေးလေး တစ်ဘက်တစ်လမ်းက ဝင်ငွေတိုးစေဖို့ကြံရွယ်တယ်…. ဒီလိုလိုက်ဗျင်းတဲ့အခါမှာ သူ့ပညာအဆင့်က အငယ်တန်းစားမို့ အစွမ်းနိမ့်သရဲတွေကိုပဲနှိမ်နှင်းနိိုင်တာမို့ သရဲဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရင် မာလကီးယားပြီးပြန်လာရလေ့ရှိတယ်…ဒါကြောင့် ဝင်ငွေကလည်းထင်သလောက်မရဘူး…ဆိုတော့ သရဲဆိုးတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ သူ့ပညာကို Upgrade လုပ်ရင်း သရဲဆိုးတွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ သူထင်မထားဖူးတဲ့ သရဲမလေးနဲ့တွေ့ရင်း နောက်ကွယ်က ထူးဆန်းရှုတ်ထွေးလှတဲ့ ဆိုးယုတ်မှုတွေကို သိလာရတဲ့အခါမှာတော့…. ဒီစီးရီးက အပိုင်း(၁၆)ပိုင်းရှိပြီး ရယ်လည်းရယ်ရသလို အက်ရှင်ခန်းတွေလည်း တစ်လှေကြီးပါတယ်.. ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းလေးက ဆန်းလှသလို မင်းသားမင်းသမီးကလည်း ချေ့စရာလေးတွေမို့… ဖန်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်… Credit Review Zawgyi လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္..သူ႔မွာ ေမြးရာပါထူးျခားတဲ့စြမ္းအင္ပါလာတယ္…အဲ့ဒါက သရဲေတြကို ျမင္ေနရသလို ဒီသရဲေတြကို ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္လို႔လည္းရတယ္…ဒီေလာကႀကီးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့သရဲေတြ ရွိသလို လူေတြကို လိုက္လံဒုကၡေပးေနတဲ့ သရဲဆိုးေတြလည္းရွိေနေတာ့ ဒီလူငယ္ေလးဟာ ...